Satelite-ka 'GOES-16' wuxuu dirayaa sawirradii ugu horreeyay ee xallinta sare ee Dunida | Saadaasha Shabakadda
Waxaan ku noolnahay adduun, indhaheenna, oo aad u weyn; Maaha wax aan micno lahayn, markii aan doonayno inaan u safrayno qaarad kale marar badan ma lihin xulasho aan ka ahayn inaan qabanno diyaaradda oo aan muddo ku sii nagaano. Laakiin runtu waxay tahay inay ka mid tahay meerayaasha ugu yar Caalamka. Si aad fikrad nooga siiso, Jupiter wuxuu la jaan qaadi doonaa 1000 meere oo Dunida u dhigma kuweenna, iyo Qorraxda 1 milyan.
Laakiin maadaama ay yaryihiin macnaheedu maahan inaysan fiicnayn. Xaqiiqdii, illaa iyo hadda waa midka kaliya ee aan ka ognahay nolosha dekeddaas, oo qaadatay qaabab iyo midabbo badan oo dhulka ka dhigaya mid u gaar ah (ugu yaraan, illaa iyo hadda). Hadda waxaan fursad u helnay inaan ku aragno aragti ka duwan: tan tan leh dayax gacmeedka NASA ee GOES-16., taas oo soo dirtay sawirro cajiib ah.
1 Xeebta afrika
3 Kariibiyaanka iyo Florida
4 Guddiyada Infrared United States
Sawir - NASA / NOAA
Hawada qalalan ee ka jirta xeebta Afrika ee lagu arkay muuqaalkan cajiibka ah waxay saameyn ku yeelan kartaa xoojinta iyo sameynta duufaannada kulaylaha. Waad ku mahadsan tahay GEOS-16, khubarada saadaasha hawadu waxay awoodi doonaan inay darsaan sida duufaanadu u xoogeystaan ​​markay ku soo dhowaadaan Waqooyiga Ameerika.
Fiicnaanta sawirka ayaa noo ogolaanaya inaan aragno duufaantii dul martay Argentina markii la qabtay.
Kariibiyaanka iyo Florida
Yaan ku riyoon inuu aado Kariibiyaanka iyo / ama Florida? Dhanka kale maalintaas ayaa imanaysa, waad arki kartaa si aan hore loo arag; xitaa biyaha gacmeed waa la arkaa.
Guddiyada Infrared United States
Sawirkan oo ka kooban 16 guddi, Mareykanka waxaa lagu arkay infrared, taas oo ka caawi culimada saadaasha hawada inay kala gartaan daruurta, uumiga biyaha, qiiqa, barafka iyo dambaska fulkaanaha.
Dayax gacmeedku wuxuu qabtay muuqaalkan quruxda badan ee Dayaxa markuu meeraysanayo meeraheenna.
Ma jeceshahay iyaga Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato GOES-16, riix halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Dayax gacmeedka NASA ee loo yaqaan 'GOES-16' wuxuu dirayaa sawirradii ugu horreeyay ee xallinta sare leh ee Dunida